Mamelona indray ny fiteny Inuktitut ao amin’ny media sosialy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Janoary 2019 5:03 GMT
Vakio amin'ny teny English, Italiano, русский, Français, Ελληνικά, Português, čeština , Español, 繁體中文, Aymara, English
Niditra media sosialy ny Fikambanana Qikiqtani Inuit (QIA) mba handrisika ny fampiasana bebe kokoa ny Inuktitut, fiteny Inuit. Miorina ao amin'ny faritr'i Qikiqtani (Baffin) ao Nunavut, faritany tanora indrindra ao Canada, miasa mba “hiaro, hitantana sy hampandrosoana ny zo sy tombontsoan'ny Qikiqtani Inuit” ny fikambanana .
Zava-dehibe indrindra izany satria ny mpikaroka dia manamarika “ny fihenan'ny hatsaran'ny Inuktitut ao Nunavik – anisan'izany ny fitsipi-pitenenana ambany, ny taha ambany amin'ny fahaizana voambolana sy ny fanafangaroana hatrany ny inuktitut amin'ny teny Anglisy.” Araka ny tatitra nataon'ireo mpikaroka, dia ny fiantraikan'ny media tsy amin'ny fiteny Inuktitut sy ny tsy fahampian'ireo mpampianatra mahafehy ny Inuktitut no antony fanampiny
Araka ny vaovao avy amin'ny loharanom-baovao samihafa avy amin'ny Tetikasa momba ny Fiteny An-dalam-pahaverezana, dia eo amin'ny 14.000 sy 30.000 ireo teratany mpiteny ny Inukutit, saingy heverina ho “marefo” ny teny araka ny filazan'ny Atlas momba ny Teny Manerantany an-dalam-pahaverezana ao amin'ny UNESCO.
Ny fanentanana an-tserasera natao tao amin'ny Instagram, Twitter, sy Facebook dia mampahafantara ny teny Inuktitut nosoratana tamin'ny silabon'ny tompotany Kanadiana ary nanangona azy ireo tamin'ny alàlan'ny fanontana novokarin'ny Foibe Ara-kolontsaina sy ny Fivarotana Printy ao Cape Dorset. Mampiseho endrika maro amin'ny kolontsaina Inuit ny fanazavana
Iray amin'ireo hetsika maro natao hampiroboroboana ny fiteny ny tetikasa Word of the Day (ny voambolana anio). Manohana ny fifaninanan-kira sy tononkalo inuktitut fanao isan-taona, ary ny famokarana fitaovam-pianarana ho an'ny ankizy madinika ny QIA. Miara-miasa amin'ny Inhabit Media, orinasa fanontana iray izay Inuit no tompony any Nunavut, mamokatra boky ho an'ny ankizy nosoratan'ireo mpanoratra Inuit avy ao amin'ny faritany ny QIA.
Raha hijery ny sary feno, tsidiho ny kaonty Instagram @Qikiqtani_Inuit.